FIVORIAN’NY PARLEMANTERA : « Tokony hampitomboina ny tetibolan’ny sosialim-bahoaka »
Afak’omaly no nanatanterahana ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana faharoan’ireo parlemantera ho amin’ity taona ity. 19 octobre 2017
Teo anivon’ny antenimieram-pirenena manokana dia nisy tamin’ireo solombavambahoaka no niray feo fa tokony hataon’ny fitondram-panjakana laharam- pahamehana amin’ireo volavolan-dalàna hodinihina eny Tsimbazaza ny mahakasika ny tetibolam-panjakana 2018 ho an’ny sosialim-bahoaka.
Anisany nitondra ny fanehoan-keviny tamin’izany ny depiote, Raholdina Naivo izay voafidy tao anatin’ny vondrona Mapar. Nambarany fa « tokony hampitomboina ny tetibola eo amin’ny lafiny sosialy. Ny laharam-pahamehana amin’izao dia tokony handinihana ny tetibola hoe misy fiantraikany any amin’ny vahoaka ve ? Raha misy olana eny amin’ny fiarahamonina dia ampidiro ao anaty tetibola daholo », hoy ny solombavambahoaka Mapar. Ankoatr’izay dia nitovy tsy misy valaka amin’izay ihany koa ny fanambaràna nataon’ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao Mananjary, ny depiote Cathy. Nolazain’ity farany ihany koa fa tokony hampitomboina ny vola hatokana amin’ny sosialim-bahoaka ho amin’ny tetibolam-panjakana 2018 tafiditra ao anatin’izany ny lafiny fahasalamana, ny tsy fandriam-pahalemana ary ny raharahana ady tany.
« Tokony tsy mitsahatra mihitsy ny fitondram-panjakana mijery ny vahoaka. Amin’izao i Madagasikara tafiditra ao anatin’izany hoe ady amin’ny pesta izany ary mahamenatra ihany izany, matoa misy ireny dia misy lesoka lehibe ao. Manoloana izany dia tokony hampiana ny tetibolam-panjakana eny amin’ny Kaominina amin’ny fanadiovana, amin’ny sosialim-bahoaka eny anivon’ny minisiteran’ny mponina satria eny no paika hialana amin’ny fahasahiranana », hoy hatrany ny nambarany.
Fanampin’ireo dia tokony hataon’ny fanjakana laharam-pahamehana ihany koa ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana amin’ny alalan’ny fampitaovana ireo mpitandro filaminana ho entina miady amin’ny dahalo. Eo ihany koa ny raharahana ady izay tena maharary ny vahoaka amin’izao fotoana izao dia tokony ho jerena akaiky. Ireo raha atambatra ny teboka eo amin’ny sehatry ny sosialim-bahoaka izay mila fijerena maika amin’izao fotoana izao, ary angatahin’ireo solombavambahoaka ihany koa ny hananany tetibolam-panjakana manokana ho amin’ny taona 2018.